साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर ….कसरि बन्छ त ? पुरा पढनुहोस। - Mitho Khabar
साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर ….कसरि बन्छ त ? पुरा पढनुहोस।
July 6, 2020 mithokhabarLeaveaComment on साढे तीन लाखमै नेपालमै बन्छ यस्तो आकर्षक घर ….कसरि बन्छ त ? पुरा पढनुहोस।
कोरियाली कम्पनि एसवाई प्यानल आफ्नो उत्पादन शुरु गरेको छ । फेब्रिकेटेड भवन निर्माण सम्बन्धि सामान उत्पादन गर्ने कम्पनीले यसै हप्तादेखि उत्पादन शुरु गरेको हो । नेपालका बिभिन्न जिल्लामा कम्पनिबाट विभिन्न रंगहरुमा छाना तथा वाल प्यानलहरु उत्पादन शुरु गरेका छन् ।बिभिन्न रंगको छाना र वाल २ देखि ६ इन्चीसम्म बाक्लो उत्पादन गरिने कम्पनीले जनाएको छ। शतप्रतिशत कोरियन प्रबिधि र लगानीमा स्थापना गरिएको सो कम्पनिको उत्पादनहरु भुकम्प प्रतिरोधी,सस्तो ,६० बर्ष टिकाउ हुने जनाइएको छ ।
७२ करोड रुपैयाँ अधिकृत पुंजी रहेको सो कम्पनीले नेपालमा पहिलो पटक आधुनिक प्रबिधिद्वारा प्यानल उत्पादन शुरु गरिएको जनाइएको छ । कम्पनिद्वारा उत्पादन हुने छाना र वाल गर्मि क्षेत्रका लागि बरदान हुने जनाइएको छ ।सो छानाले ८ देखि १० डीग्रीसम्म तापक्रम रोक्न सहयोग गर्छ। यो प्रविधिले चितवन लगायत तराइबासिलाई गर्मिबाट बच्न ठुलो सहयोग गर्ने छ । त्यसैगरी पहाडी र हिमाली भागमा बसोबासीका लागि पनि बरदाननै साबित हुने छ ।१२ सय डिग्रीको तापक्रम कलर कोट गरिएको स्टील दुई तिर र बिचमा पोलिट़ाइरोन इन्सुलेसन गरिने भएकोले यो प्यानलले चिसो तातो रोक्न मद्दत गर्दछ ।
४३ जिल्लामा डिलर वितरण गरिसकेको र कोल्डस्टोरको लागि चाहिने प्यानलसमेत उत्पादन गरिरहेको कम्पनीले आधुनिक प्रविधिमै स्टीलको ढोका र यूपिभिसी झ्याल समेत उत्पादन तयारी गरिरहेको छ । एउटा सामान्य कारको मुल्य बराबरमा साढे २ तला सम्मको घर निर्माण हुन्छ ।सरकारले भूकम्पबाट ध्वस्त भएका घर निर्माणको लागि दुई लाख रुपैयाँ दिने घोषणा ग¥र्यो । यो घोषणापछि धेरैले आलोचना गर्दै भने, दुईलाख दिएर पनि घर बन्छ ? सामान्य रुपमा हेर्दा दुई लाख सानो रकम हो ।यति थोरै पैसाले कहाँ घर बन्ला ? तर दशकदेखि स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरेर घर बनाइरहेको एउटा कम्पनीले डेढ लाखमा घर बन्ने दावी गरेको छ ।
हिमालयन ब्याम्बो प्रालि जसले डेढ लाखमै भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने दावी गरेको छ ।कोठाको घर डेढ लाखमै निर्माण गर्छौ । मुलुकभित्रै रहेको बाँसबाट राम्रो घर निर्माण गर्न सकिन्छ,’ कम्पनीका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले बिजमान्डूसँग भने, ‘घर निर्माणमा विदेशी सामानको प्रयोगनै गर्नुपर्दैन । स्वदेशी वस्तुको प्रयोग हुने भएकोले सस्तो भएको हो ।’भूकम्पपछि सस्तो, छिटो र सजिलोसँग घर निर्माण गर्न चासो बढेको छ । छिटो र सस्तो निर्माणका लागि यस्ता घर उत्तम हुन्छन् ।
कम्पनीले एक महिना भित्रै घर निर्माण गरेर ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्ने दावी गरेको छ । १५ दिनमा फाउन्डेसन र १५ दिनमा घरनै निर्माण सकिने जानकारी पनि कम्पनीले दिएको छ ।‘हामी ग्राहकले चाहे अनुसारको घर निर्माण गर्न सक्छौ । न्यून, मध्यम र उच्च आय भएका ग्राहकको माग अनुसार घर निर्माण गर्न सक्ने क्षमता छ,’ अध्यक्ष जोशीले भने, ‘तर अहिलेको आवश्यकता भनेको भूकम्प पीडितको पुनस्र्थापनाको हो । त्यसैले डेढ लाख र साढे तीन लाख रुपैयाँको घरलाई बढी लक्षित गरेका छौ ।’ गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)ले बाँसको घरको बारेमा जानकारी लिइसकेको छ ।
कम्पनीले एक हजार घर निर्माण गर्नसक्ने जानकारी एनआरएनलाई दिएको छ ।अरु घरजस्तै फाउन्डेस ढुंगा, सिमेन्ट र ईटाबाट तयार गरिन्छ । फाउन्डेसन तयार भएपछि बाँसबाटै विम, चौकस लगायतका सम्पूर्ण सामाग्री तयार हुन्छ । कम्पनीले घरको लागि आवश्यक पर्ने सामग्री हेटौंडामा रहेको आफ्नो उद्योगमा तयार गर्छ । फाउन्डेसन तयार भएपछि उद्योगबाट सामान ल्याएर प्राविधिकले जोड्ने काम गर्छन् । घरको छानामा टिन प्रयोग गरिन्छ भने भित्तामा बाँस प्रयोग हुन्छ । बाँसको भित्तामा सिमेन्टले प्लास्टर गरिन्छ ।कम्पनीले बाँसबाट निर्माण भएको घरको आयु ३० वर्षको हुने दावी गरेको छ ।
‘यो घरको ग्यारेन्टी ३० वर्षको गरेका छौ । तर यो भन्दा बढी पनि टिक्छ,’ जोशीले भने, ‘ घर निर्माणलाई दिगो बनाउने हाम्रो प्रयास हो ।’घर बनाउँदा प्रयोग हुने बाँसको आवश्यक ट्रिटमेन्ट गरिन्छ । कम्पनीका अनुसार ट्रिटमेन्ट गरेपछि बाँसमा किरा लाग्ने समस्यानै हुँदैन । यस्तो बाँसमा धुलिया लाग्ने समस्या पनि हुँदैन । बाँस आफै इन्सुलेटेड भएकोले विग्रिने समस्या पनि कम हुन्छ ।कम्पनीले अहिलेसम्म एक हजार घर बनाइसकेको छ । कम्पनीले व्यक्तिगत, गैरसरकारी संस्था, विद्यालयलगायत लागि यस्ता घर बनाएको हो ।
कम्पनीले तीन सय स्क्वायर फिटको मुक्त कमैयाको क्याम्प, विराटनगरमा पाँच सय ८० स्क्वायर फिटको निजी आवास, मेलम्चीमा रिम्स नेपालको एक हजार स्क्वायर फिटको घर र एक हजार स्क्वायर फिटको ट्रेनिङ हल, आठ सय ८० स्क्वायर फिटको भवानी एकीकृत स्कुल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सुर्खेतमा टे«ड स्कुल, लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको ट्रेनिङ हल
आज २०७७ असार २२ गते सोमबारको राशिफल
‘संकटकाल लगाएर नेताहरुलाई हाउस एरेस्ट गर्ने’ सम्मको तयारी अचानक यसरी रोकियो’
आज २०७७ कार्तिक ६ गते बिहिबारकाे राशिफल आजकाे दिन कस्तो रहनेछ तपाईंको भाग्य ?
October 22, 2020 mithokhabar
September 22, 2020 September 23, 2020 mithokhabar
October 25, 2020 mithokhabar
को हुन यी सुन्दरी ? जसको ‘फिगरले खिच्यो संसारको ध्यान, हेरौँ बोल्ड तस्बिरहरु
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका कामलाई तिब्रता दिन ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन
काठमाडौँसहित विभिन्न स्थानमा ३ जना मृत अवस्थामा फेला, को को होलान् त?
अब डराउनु पर्दैन नेपालमै अक्सिजन प्लान्ट सफल।
फेला पर्यो जे माग्यो तेहि पूरा हुने मन्दिर, यसरी निस्किन्छ अनौठो नाग देवता सबैले पुरा पढ्नुहोस् नत्र ठुलो दशा लाग्ला ।
स्ट्रबेरी खानुस् क्यान्सरसँग लड्नुस्… आरु पनि यति धेरै फाइदा छन्
एक्कासि के भयो प्रचण्डकि पत्नि सिता दाहाल लाई … अस्पताल लगियो अवस्था गम्भीर अवस्था? मा हेर्नुहस
१८ बर्षकि नर्स छोरीलाई सकेको हो भन्दै बुबा आए मिडियामा ,४ जन केटाहरले बोकेर लगेछन, कसरि भिज्यो बिस्तार ? (भिडियो)
विवाह गर्न हतार भयो तर केटा नपाएर हैरान छु
अभिनेत्री अमिषाले आफ्नै बुवा माथि लगाईन यस्तो आ’रो’प, आमाले नि’का’लिन घरबाट
आठ वर्षको उमेरमा बिहे गरेकी वसुन्धराको महिना नबित्दै श्रीमान्को मृ’त्यु , ८० वर्ष एकल जीवन बिताएकी…
थपिएको निषेधाज्ञामा के गर्न पाईन्छ, के पाईंदैन ? यस्तो छ आदेश
नर्भिकमा उपचाररत अभिनेत्री निशालाई करिष्मा मानन्धरको यति ठूलो सहयोग !
टिपरको ठक्करबाट कार चालकको मृत्यु, प्रहरी भन्छ- ‘कारकै गल्ती’
एसईईको नजिता सार्वजनिक हुने मिति तोकियो कैले हुदैछ त नतिजा प्रकासन
मेरो रे’ट ५ मिनेटको ३ लाख हो ति’र्न सक्ने कोइ छ भने आउ: शुस्मा कार्की (भिडियो हेर्नुहोस)
जस्ले बिहान उठेर यि ४ काम गर्छ त्यो सधैं गरीब रहन्छ हेक्का राख्नुस(भिडियो सहित)
७ दिनभित्र तपाइले सोचेको काम बन्नेछ पढेर ॐ लेखि सेयर गरौं!
दुई हजार वर्ष लगाएर बनाइएको, भीरमा झुण्डिएको अत्यन्तै शक्तिशाली मन्दिर! ॐ लेखी सेयर गर्नुहोस
मंगलवारदेखि अघोषित लूजडाउन, काठमाडौं उपत्यकामा के के गर्न पाइन्छ ?
सुपा देउरालीको दर्शन गरी माताको महिमा जे भाकल ग-योे त्यो पुग्ने जनविश्वास, सुपा देउराली मन्दिरको